I-thalamus yinto enkulu enkulu, ebanzi eboyiweyo ebomvu engcwatywe phantsi kwe -cortex ye-cerebral . Iyabandakanyeka ekuboniseni imizwa kunye nokulawulwa kwemisebenzi yemoto. I-thalamus iyisakhiwo somlenze kwaye idibanisa indawo ye-cortex ye-cerebral echaphazelekayo ekubonweni kunye nokunyakaza kunye nezinye iinxalenye zesifo sengqondo kunye nomgudu womgogodla oba negalelo ekuveleleni nasekuhambeni.
Njengomlawuli weenkcukacha zengqondo, i-thalamus iphinda ilawule ukulala nokuphaphama. I-thalamus ithumela iimpawu kwiingqondo ukunciphisa ukuqonda kunye nokuphendula kwimiba enengqondo, njengengxolo ngexesha lokulala.
I-thalamus ibandakanyeka kwimisebenzi emininzi yomzimba kuquka:
Ufumana i-Auditory, i-Somatosensory, kunye neZaziso zoMboniso ezibonakalayo
Ibuyisela izibonakaliso ezibonakalayo kwiCerebral Cortex
Ukukhunjulwa kweMemori kunye neNgcamango Emoya
Ulawula iiNtlanzi zokulala kunye neeVukani
I-thalamus ine-nerve edibeneyo kunye ne-cortex ye-cerebral kunye ne- hippocampus . Ukongeza, ukudibanisa nentambo yomthambo kuvumela i-thalamus ukuba ifumane ulwazi olunzulu kwiinkqubo zentlungu kunye neendawo ezahlukeneyo zomzimba. Le ngcaciso iyakuthunyelwa kwingingqi efanelekileyo yengqondo ukuze iqhutywe. Ngokomzekelo, i-thalamus ithumela ulwazi lwe-sensory touch kwi-cortex ye-somatosensory ye- lobe ye-lobes .
Ithumela ulwazi olubonakalayo kwi-cortex ebonakalayo ye- lobes occipital kunye neempawu zokuhlola ezithunyelwa kwi-cortex yokuhlola ye- lobes ye- temporal .
Ikhomishini , i-thalamus ihlala kwindawo ephezulu yengqondo , phakathi kwe-cortex ye-cerebral kunye ne- midbrain . Iphakamileyo kune- hypothalamus .
I-thalamus ihlukaniswe ngamacandelo amathathu nge-medullary lamina yangaphakathi. Uluhlu lobunjwa be-Y olumhlophe olubunjwe ngamafayibha e-myelinated ukwahlula i-thalamus kumacandelo angaphakathi, aphakathi kunye nongxenyeni.
I-thalamus iyinxalenye ye- diencephalon . I-diencephalon enye yezinto ezibini ezibalulekileyo ze-forebrain. Iqukethe i-thalamus, i- hypothalamus , i-epithalamus (kuquka i- pineal gland ) kunye ne-subthala (i-ventral thalamus). Izakhiwo zeDiphaphalon zenza udonga lomgangatho kunye nolusemva lwe- ventricle yesithathu . I-ventricle yesithathu inxalenye yenkqubo yokudibanisa (i -ventricle cerebral ) engqondweni eqhubekayo ukuze yenze umda wendawo yomgudu womgcini .
Ukulimala kwi-thalamus kunokubangela iingxaki ezininzi ezinxulumene nengqiqo . I-Thalamic syndrome yimeko edala umntu ukuba abe nosizi oluninzi okanye ukulahlekelwa kwintsholongwane. Ukulimala kwiindawo ze-thalamus ezidibaniswa nokuboniswa kwezinto ezibonakalayo zingabangela iingxaki zentsimi ebonakalayo. Ukulimala kwe-thalamus kunokubangela ukuphazamiseka kokulala, iingxaki zememori kunye nemiba yokuphicotha.
Inatomy of Heart: Aorta
Ukuqonda iiPancreas zakho
I-Lymphatic System Components
I-Anatomy yeBongo: Umsebenzi weCerebellum
Iindlela ezigqithiseleyo ze-Intanethi eziThutho
Ngaba unganditshela amagama amandulo eenyanga?
Iyintoni intsingiselo ye "American Pie" Ivesi 3 ("Ngoku iminyaka elishumi ...")?
Ukuthetha Ngentsapho Yakho
Ukusebenzisa amanani amaninzi ngokulinganisa ngokuchanekileyo
I-Mariah Carey 18 Inombolo-One Hits
I-RISD - I-Rhode Island School of Design Admissions
Imbangela nefuthe (ukubunjwa)
Imbonakalo ye-Leidenfrost Effect
Indlela Yokuthetha NjengaLungu leNtsapho yaseSoprano
Unyaka Omncinci kaBrace Murray Hopper
Intshayelelo kwiCritical Thinking
I-20 ephezulu yeengoma zeeNgoma zexesha lonke
Indlela Yokuxhasa Abafundi Abanamava Asebenzayo
I-Occupy Wall Street Iikhathuni
Ukudala iChina Calligraphy